I-China Umshini wokuxuba umshini wamanzi nophawuda | Qiangzhong
Umshini wokuxuba amanzi nophawuda
Lo mkhiqizo usetshenziswa kabanzi kwezokudla, isiphuzo, okwenziwa ngemithi, ukwenziwa kwezinto eziphilayo, ukwelashwa kwamanzi, izimboni zamakhemikhali zansuku zonke, ezophethiloli nezamakhemikhali.
Iphampu lenzelwe ukondla i-hopper, ivemvane valve, ipayipi lekasi I, II, impeller, shaft enkulu, uphawu lokukhanda, ijakhethi yokupholisa amanzi, isihlalo sepompo, idivaysi yokudlulisa ibhande, imoto, njll. Zonke izingxenye zemishini ezixhumene nayo ngezinto zokwenziwa zenziwe ngensimbi engagqwali esezingeni eliphezulu futhi emelana nokugqwala, ehlangabezana nezidingo zezempilo zokudla. Lapho le divayisi isebenza, imoto ishayela umphini oyinhloko ne-impeller ngebhande, bese impeller izungeza ngesivinini esikhulu kupayipi lekesi II ukufeza inhloso yokuxuba uketshezi. I-impeller yenziwe nge-Ocr19N19, okulula ukuyihlukanisa nokuyigeza, futhi kuvimbela amabhaktheriya ekuqoqeni. Uphawu lwemishini lwakhiwe yindandatho emile, indandatho eshukumisayo esindayo, intwasahlobo yensimbi engagqwali nendandatho yokuqinisa ukuminyana. Kukhona futhi uphawu lwangaphandle oluvimbela ukuvuza kwamanzi. Umphini omkhulu nenjini ziqhutshwa yibhande le-V, futhi ipompo ifakwe ibhantshi lokupholisa amanzi kanye ne-tensioner Ingxenye yezimoto ne-wiring yaleli phampu ingavimbela ngempumelelo ukuqoqwa kwamanzi nomanzi, futhi kulayini ngokuphepha kukagesi. Imoto nesisekelo sepompo kuxhunywe ngamabhawodi, okwenza wonke umshini ungahanjiswa ngokuzithandela ngaphandle kwesisekelo sokufakwa okungaguquki.
Iphampu lenhlanganisela libizwa nangokuthi i-powder powder mixer, i-liquid material mixer, ipompo yokuxuba oketshezi oketshezi, njll. Inezinzuzo zokubukeka okuyingqayizivele, usayizi ohlangene, ukuvikelwa kwemvelo nokuhlanzeka, ukonga amandla, ukusebenza kahle kakhulu, ukuxubana okusheshayo nokuhamba okulula. Okokusebenza ukuhlanganisa ngokuphelele impahla eyi-powdery kanye noketshezi ngejubane elikhulu lokujikeleza elijikelezayo ukuyenza ingxube edingekayo bese uyithumela. Futhi ingamunca izinto ezinokushisa okuphezulu kwama-degree angama-80. Ingashesha ukuhlanganisa oketshezi futhi ingasetshenziselwa ukukhiqizwa kweziphuzo zezithelo nezinye iziphuzo ukufeza izinzuzo ezifunwayo.
Iphampu liqukethe umzimba omkhulu kanye ne-impeller, efakwe ngokubhekelana komunye nomunye. Imunca iziphuzo nezinto eziqinile ngokwehlukana ngepayipi elibiyelwe ngababili, ibavimbele ekuxakaneni ngaphambi kokungena engxenyeni enkulu. Uketshezi lungena emzimbeni omkhulu wepompo ngejubane eliphezulu futhi ngasikhathi sinye kukhiqizwa i-vacuum maphakathi ne-Rotor ne-stator ukuncela okuqinile. Ngokulungisa i-valve engezansi kwe-hopper, okuqinile kungadonswa ngokulinganayo. Imishini idizayini esezingeni eliphezulu, isebenza kahle, isebenza kahle ekukhiqizeni futhi ihlala isikhathi eside. Ingakwazi ukuhlanganisa ngokushesha futhi ngokufana izinhlobonhlobo zezinto eziqinile ngaphandle kokuthintana nomoya, futhi okokusebenza kuxubeke ngokuphelele futhi kwavuselelwa kabusha. Ingasabalalisa futhi isimamise izinto ngesikhathi esifushane, inciphise ububanzi bezinhlayiya zokusabalalisa, futhi ekugcineni ithole umkhiqizo omuhle, wesikhathi eside ozinzile.
Langaphambilini Umshini wokuxuba amanzi nophawuda
Olandelayo: Ipuleti lensimbi engagqwali nesihlungi sefreyimu ngesihlanganisi esiphakeme se-shear
Iphampu ye-emulsification yamanzi ne-powder
Amanzi ne-powder emulsifier
Isihlanganisi samanzi nophawuda
Impompo yokuxuba amanzi nempuphu
Iphampu yokuxuba amanzi ne-powder ephezulu yokugunda i-shear
I-Shear ne-Emulsification Pump SRH-H
Uhlobo oluphakeme lwe-Shear Emulsifier Type IV